जात्रै जात्रा टिम भन्छन् 'व्यासवायिक धर्म निर्वाह गरौ'
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ २३, २०७६०८:१७
फिल्म । तेस्रो सातामा प्रदर्शनरत फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ ले राम्रो ब्यापार गरिरहेको छ । ‘वर्ड अफ माउथ’ राम्रो भयपछी फिल्म हेर्ने दर्शक मल्टिप्लेक्समा घटेका छैनन् । यसैले गर्दा पनि तेस्रो सातामा फिल्मले राम्रो शो पाइरहेको छ । तर , बलिउडको ठुलो फिल्म भारत प्रदर्शन भएसँगै यसको शो अधिकांस मल्टिप्लेक्समा घटाइयो । फिल्मले राम्रो दर्शक पाउदा पाउदै पनि फ्रेश रिलिजका कारण शो घट्यो । दर्शक हुदा हुदै पनि शो घटेपछि यसमा कार्यकारी निर्माता रवीन्द्र सिंह बानियाँ र निर्देशक प्रदीप भट्टराईले सोसल मिडिया मार्फत गुनासो पोखेका छन् ।
‘हामीले दर्शक पाउँदा पाउदै पनि शो घटाइयो’ निर्देशक भट्टराई लेख्छन् ‘दर्शकको चाप अनुसार शो बाडफाड गर्नु पर्ने होइन र ?’ त्यसो त यो घटना नौलो होइन । कयौ पटक हिन्दी फिल्मको अगाडी नेपाली फिल्म निरिह हुने गरेको छ । विदेशी फिल्मका कारण सधैं नेपाली फिल्म चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । निर्माताहरुले राम्रो शेयर पाउने मल्टीप्लेक्सहरुले सधैं नेपाली फिल्मलाई पाखा र विदेशी फिल्मलाई काखा गर्दै आइरहेका छन् । मल्टीस्टारर फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ ले पनि यो नियति भोग्नु परेको छ ।
फिल्मले राम्रो दर्शक पाइरहेको अवस्थामा मल्टीप्लेक्सहरुले ठूलो संख्यामा शो घटाएका छन् । नेपालको ठूलो मल्टीप्लेक्स चेन क्यूएफएक्सले राजधानीका आफ्नो पाँच स्टेशनमा प्रदर्शनको पहिलो दिन ‘जात्रै जात्रा’ लाई १९ शो दिएको थियो । दोस्रो हप्ता पनि फिल्मले यही आसपासमा शो पाएको थियो । फिल्मले क्यूएफएक्समा बुधबार ७ शो पायो । सबै शो हाउसफुल भए । बिहीवार पनि फिल्मलाई ७ शो नै छ । राजधानीका अन्य मल्टीप्लेक्सहरुले तेस्रो हप्ता (मंगलवारसम्म) पनि फिल्मलाई राम्रो शो उपलब्ध गराएका थिए ।
बुधबारबाट सबैले शो घटाएका छन् । निर्देशक भट्टराईकै लेखन रहेको फिल्म अघिल्लो भागको सिक्वेल हो । नेपालमा निर्मित सिक्वेलमा यसले निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ । त्यसो त भारतलाई दर्शकले अपेक्षा अनुसार नपाउँदा ‘जात्रै जात्रा’ को शो बढ्ने अनुमान धेरैले लगाईरहेका छन् । तर , चर्को मुल्य तिरेर ल्याउने विदेशी फिल्ममा वितरक र हल संचालकको लगानी हुन्छ त्यसैले ‘फ्री’ मा पाउने नेपाली फिल्म उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । फिल्मका कार्यकारी निर्माता रविन्द्र सिंह बनियाँ हुन् ।
फिल्ममा यज्ञश्वर पौडेल र सिंगे लामाको लगानी छ । मित्र डि. गुरुङको सम्पादन रहेको फिल्मलाई शिवराम श्रेष्ठले खिचेका हुन् । फिल्ममा बर्षा राउत , राजाराम पौडेल , प्रकाश घिमिरे, अञ्जु महर्जन, सोहित मानन्धर, सुस्मिता कार्की, प्रेम पाण्डे, प्रियंका झालगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । यसमा शंकर महर्जन द्वन्द्व निर्देशन छ । निर्देशक भट्टराई आफैंको कथा रहेको फिल्ममा कालीप्रसाद बाँस्कोटा र कृष्ण भारद्वाजको संगीत छ ।
‘जात्रै जात्रा’ टिम अष्ट्रेलिया उड्दै
को बन्दैछिन् ‘गीत’ ?
सुरजको ‘हृदय भरी’मा पल
निर्देशक भन्छन् ‘८० प्रतिशत सन्तुष्ट छु’